हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले गरे दोस्रो विवाह (फोटो फिचर) - Narayanionline.com
काठमाडौँ, असोज २५–
चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले दोस्रो विवाह गरेका छन् ।
आज (सोमबार) बिहान डोलेश्वर महादेवको मन्दिर पुगेर गजुरेलले विवाह गरेका हुन् । उनले सामाजिक संजालमा तस्विर सार्वजनिक गर्दै आज विवाह बन्धनमा बाधिएको जानकारी गराएका हुन् । उनले विवाहको कारण बारे लामो शब्द कोरेका छन् ।
गजुरेलले चार वर्षअघि पहिलो श्रीमतीसंग डिभोर्स गरेका थिए ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्ः
सम्पुर्ण मिडियाकर्मी साथीहरुलाई सादर अनुरोध छ( कृपया मेरो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा काल्पनिक समाचार नलेखिदिनुहोला । मन्जुजीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने अमर्यादित कथा नकथिदिनुहोला । हाम्रा सन्तानको सुख र शान्तीकालागी परपीडक ट्रोल र भिडियो नबनाईदिनु होला !
बिगतका अराजक अन्तर्वार्ता, असामाजिक क्रियाकलाप तथा अभद्र व्यवहारका कारण म र मेरा छोराछोरीले ठूलो आघातबाट गुज्रनु परेको छ । त्यस्ता क्रियाकलापलाई स्थान दिने, उचाल्ने र गिजोल्ने युट्युब, अनलाइन समाचार, टिकटक लगायत संजालका प्रयोगकर्ताहरुलाई पनि भद्र सुझाव छ-कृपया एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर बोल्ने र लेख्ने गर्नुहोला । सामाजिक सन्जालको चरम दुरुपयोगले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पार्न सक्ने गंभिर असरलाई पनि महशुस गर्नुहोला ।
अन्त्यमा, पुनः सम्पुर्णं आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुलाई यो सुखद जानकारी गराउछौँ कि हामीले आज मिति २०७८ साल असोज २५ गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवको दर्शन गर्यौँ । त्यसपछि परिवारको उपस्थितिमा त्यहीँ विवाह सम्पन्न गर्यौँ । अनि, सपरिवार मानवसेवा आश्रम (कौशलटार)मा रहेका बुवाआमालाई खाना खुवाएररखाएर विवाह सम्पन्न गरेकाछौँ । परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना र आशिर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद
किन मानिनन् सुपुष्पाले रमितसँग काम गर्न ?
आइतबारदेखि भरी सिलिण्डर ग्यास विक्री गरिने